News | MYNFREL | Page 2
Wish You Happy New Year – 2020
Voter List Registration _ Voter Information Campaign Materials _Paoh Ethnic Language
Posted By: MYNFRElon: September 21, 2019 In: Materials, News, Resources
1st to 5th Amendment of Electoral Law – Myanmar (Passed and Draft)
Posted By: MYNFRElon: September 20, 2019 In: Materials, News, Resources
1st Amendment – Electoral Law- 2010 2nd Amendment-UEC Law 3rd Amendment – Electoral Law 4th Amendment_Electoral Law-Amyotha Hluttaw 4th Amendment_Electoral Law-State-Region 4th A...	Read more
Lar Athu (Come Together) by MYNFREL – Theme Song for Youth Engagement in Election
Posted By: MYNFRElon: September 19, 2019 In: Materials, News, Resources
Exclusive Interview with DVB About “Youth and 2020 Election” (DVB ရဲ့ စဉ်းစဉ်းစားစား မဲတပြားအစီအစဉ်မှာ MYNFREL မှ မဇင်မာဦးမှ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်)
Posted By: MYNFRElon: September 17, 2019 In: News
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူငယ်တွေ မဲလာပေးကြမှာလား? မဲထွက်ပေးဖို့ ဘာတွေ လုပ်နေကြလဲ? လူငယ်တွေ မဲထွက်ပေးဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့ လုပ်သေးလဲ? ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှဝေပေးထားပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အငြံ...	Read more
Democratic and Civic Values Education for Youths _ Loilen Township, Southern Shan State (လူငယ်များအတွက် ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုး၊ အနှစ်သာရနှင့်၊ နိုင်ငံသားကောင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ အသိပညာပေးသင်တန်း)
“The Above Video is the Performance of Awareness Delivering Night to their Community by the Training Alumni.” Name of Training : Democratic and Civic Values Education for Youth...	Read more
Election Observation through Media-En
Posted By: PlanetCreatoron: May 23, 2019 In: News, Training Resources
The huge coverage of Media in Myanmar started becoming after 2012 election...	Read more
Posted By: PlanetCreatoron: March 07, 2018 In: News
[:mm]ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ ဦးကျော်တင်ကို နုိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတဦးထင်ကျော်က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလုိုက်ကြောင်း ယနေ့ ညနေပုိုင်းတွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ ဦးကေ...	Read more
လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းစဉ် – စာစဉ် (၁)၊ အပတ်စဉ် ၁/၂၀၁၈
[:mm]မင်္ဂလာပါ….. ၂၀၁၈ မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းတွေကလည်း ခပ်စိတ်စိတ်ပါလာနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကို တစ်စုတစည်းတည်းထားခြင်းအားဖြင့် ကိ...	Read more
ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းစဉ် – ၄/၂၀၁၈
ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းစဉ် – ၂/၂၀၁၈
Posted By: PlanetCreatoron: January 07, 2018 In: News
Archives Select Month January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 May 2019 April 2019 July 2018 March 2018 January 2018 December 2017 March 2017
" Networking to Support for Holding Genuine Elections with Democratic Norms "
" A State with Thriving Democracy through Free and Fair Elections and Practicing Civic and Democratic Norms among Citizens "
MYNFREL will stand as an organization sharing knowledge of civic/voter education and monitoring elections process without taking profit.
MYNFREL will enhance coordination with other civil society organizations.
MYNFREL will respect rights of women and men, young and old, physically and mentally without discrimination.
MYNFREL will never affect dignity and interest of every ethnic nationality–majority or minority across the country.
MYNFREL will never stand asapolitical party.
Electoral_News_December_First_Week_2019 January 22, 2020
Wish You Happy New Year – 2020 January 1, 2020
Election Monitoring Handbook-MYNFREL-2010 December 5, 2019
သတငျးမီဒီယာလလေ့ာစောငျ့ကွညျ့သူကငျြ့ဝတျနှငျ့နညျးလမျးမြား မေ 23, 2019 November 27, 2019
စက်တင်ဘာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ထူးထူးခြားခြား သတင်းများ October 24, 2019